यस्तो रहेछ बिनय र सपनाको सम्बन्ध बिनयले खोले मुख (भिडियो) – रोचक ज्ञानविज्ञान
यस्तो रहेछ बिनय र सपनाको सम्बन्ध बिनयले खोले मुख (भिडियो)
बेवारिसे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनयजंग बस्नेत र सपना रोका मगरबीचको सम्बन्धको बारेमा यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा निकै नै खैलामैला मच्चि रहेको छ । सपना र विनजंग अलग भएदेखि नै यिनीहरुको सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रश्नहरु उठ्दै आईरहेको बेला सपनाका आमाबुवाले नै विनयजंगकै कारण सपना विनयजंगबाट टाढीएको बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला मच्चिएको हो ।
जब सपनाको आमाबुवा एकै साथ मिडियामा आएर विनयजंगले छोरी भन्ने नाम दिएर छोरी सपनालाई यौ’न दु’व्र्य’वहा’रहरु गर्ने प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिए तबदेखि नै विनयजंगप्रति धेरैले कारर्वाहीको माग गरेका छन् । उत आफु विरुद्ध सपना र उनका आमाबुवाले लगाएको आरोपहरु सुनेर विनयजंग भने अचम्मित छन् । उनको भनाई अनुसार सपना र उनका अभिभावकले यस्तो आरोप लगाउन सक्छन् यो उनको कल्पनाभन्दा परको कुरा थियो ।
चारैतिर आफुविरुद्ध सञ्जालहरु खनिएपछि विनयजंगले आफ्नो र सपनाकोबीचको सम्बन्धको विषयमा बोलेका छन् । उनले सपनासंग भेट भएदेखि छुट्टीदासम्मको एकएक पलका कुराहरु गरेका छन् । विनयले सपनालाई छोरीकै दर्जामा राखेर व्यवहार गरेको बताएका छन् । उनी भावुक हुँदै भन्छन्,‘सपनालाई मैले जुनदिनदेखि भेटे उस्लाई मैले केवल छोरीकै नजरबाट हेरें । तर आज मलाई नै यस्तो घिनलाग्दो आरोप उस्ले र उस्को परिवारले लगाउलान् यो मेरो सोचाईभन्दा परको कुरा थियो ।’
निस्वार्थ भावले सामाजिक सत्कर्ममा होमिएका व्यक्ति हुन उनी । युवावयमै आमा गुमाउनु,वुवा गाडि दुर्घटनामा परेर बित्नु र जीवनसंगिनीले छाडेर जानु । त्यस यता उनी नितान्त छन् एक्लो र रित्तो । समयले उनलाई एक्लो बनाए पनि मन कहिल्यै एक्लो भएन । भन्छन नि जीवनमा सबैथोक खानु तर हरेश नखानु । हो हरेश खाएनन् उनले । र त होमिए वेवारिसेहरुको जीवन र मुहारमा खुसी भर्न । आफू रित्तिएर पनि ऋणमा डुबेर भएर पनि उनी वेवारिसेहरुको उद्धारमा तल्लिन छन् विगत आधा दशकदेखि । यही बीचमा संस्था जन्माए एक्सन फर सोसल चेन्ज ।
युवावयमा पिताजी गाडी दुर्घटनामा परेर बित्नु र उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालको वेवारिसे गृहमा थन्किएपछि त्यही समय हो उनको मस्तिक रन्थिनिएको । महालेखा परिक्षकको कार्यलयका जागिरे पिताजीको लाश वेवारिसे लाशहरुको चाङमा भेटे लगतै उनको दिमाग हल्लियो आखिर जीवन भन्नु केही रहेनछ । जो कोही मान्छे,चाहे जति सुकै सम्पन्न भए पनि एक दिन बित्नेछ । थाहा छैन को मान्छे कतिखेर बित्छ र कसरी बित्छ ? हो यही समयदेखि उनले स्थापना गरे एक्सन फर सोसल चेन्ज । संस्था स्थापना गर्नुको प्रमुख उदेश्य थियो कोही पनि मान्छे वेवारिसे भएर बित्नु नपरोस । बाँच्न नपरोस ।
यो बीचमा उनले सडक,मठ,मन्दिर,अस्पतालमा भेटिएका १०० भन्दा बढी लाशहरुको सद्गद् गरिसकेकाछन् । एउटा लाशको सद्गद् गर्न झण्डै १० हजार बढी खर्च हुन्छ । यद्यपि, आम्दानीको स्रोत कोही छैन । बरु भएको जग्गा बेचेर भए पनि यी लाशहरुको सद्गद् गरेका छन । साथी तथा सहह्ृदयीहरुसँग ऋण लिएर,चढ्दै आएको मोटरसाइकल धरौटीमा राखेर धेरै पटक लाशहरुको सदगद् र वेवारिसेहरुको उपचार गरेका छन् । राज्यका कुनै निकायबाट सर सहयोग नभए पनि साथीसंगीहरुसँग ऋण लिएरै उनले त्यस्ता वेवारिसे लाशहरुको सद्गद् गर्दै आएका छन् ।
के लगाए सपनाका आमाबाबुले बिनयलाइ आरोप ?
‘मेरो छोरी होइन सपना, छोरा हो । के छोरा मसंगसंगै सुत्नु हुँदैन ?’ यो भनाई हो बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रका अध्यक्ष विनयजंग बस्नेतको । तर यो भनाईलाई सपनाका बुवाआमाले जस्ताको त्यस्तै एक अन्तरवार्तामा बताएका छन् । सपनालाई आधि रातमा आफ्नो हातखुट्टामा तेल लगाएर मालिस गर्न लगाउँथे रे विनजजंग बस्नेतले । योपनि सपनाकै आमाबुवाले बताएका छन् ।
अलपत्र परेका लाशको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने उनले बताउँदै आएकी थिइन् । म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना दैनिकजसो काठमाडौंको पशुपति आर्यघाट आसपासमा हुन्छिन् । उनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शवको आफन्त बनेर दागबत्ती दिँदै आएकी थिइन् । तर आज उनका आमा बुबा मिडियामा रुदै आएका छन् । विनयजंग बस्नेतले सपनालाई यौ’न दु’व्र्य’वहार गरेर मा’र्नेसम्मको ध’म्की दिएको भन्दै सपनाको बुवाआमाले रुँदै बताए । भिडियोसहित